Ikhaya » iindaba » Iindaba zeJeasnn
Imveliso yokuthengisa eshushu Isitshixo seAluminiyam- I-Aluminium utsalo Iseti 3AN-20AN
Isiqwenga se-6 ISILULELE esifanelekileyo se-aluminium spanner wrench seta isiphelo esiphindwe kabini se-aluminium.
Zintathu iintlobo ze-AN Aluminium Wrench Set 3AN-20AN.
Uhlobo lwenkxaso yesiko, umbala wesiko, kunye nelogo.
Ukhuseleko lwabasebenzi kunye nabalingane bethu luphambili oluphambili ngexesha le-COVID-19.
I-Jeasnn iyaqhubeka nokubonelela ngokuzeleyo ngeenkonzo zokuvelisa ze-CNC, kubandakanya i-CNC machining, i-CNC yokugaya, ukujika kwe-CNC, kunye neprototype ekhawulezileyo njl.
Imveliso eshushu yokuthengisa -Indawo yokujonga izinto ezisecaleni yomatshini wokukhusela iMask
IJeasnn ngobuchule ibonelela ngezisombululo kumatshini wokungqinisisa okhethekileyo wesixhobo.
Siza kuvelisa nantoni na oyifunayo yezahlulo.
Ezi yimveliso yethu yimiqadi engenazintsimbi, iinxalenye zealuminium, iinxalenye zensimbi ezingenasici zeMask
UJeasnn ubuyile eofisini ukuze enze umsebenzi oqhelekileyo ngoFebruwari 10, 2020.
Kutshanje, unokuva iindaba malunga nenoveli coronavirus. Ngeliphandle, ichaphazele iindawo ezithile e-China, kodwa urhulumente wase-China uthatha amanyathelo amaninzi ukujongana nayo, sikholelwa ekubeni izakubuyiselwa kungekudala.
I-Jeasnn entsha ye-CNC yokugaya umatshini kunye nomasifundisane --- UMNTU
Kutshanje umzi-mveliso wethu, u-Jeasnn） uye wakha indawo yokusebenzela entsha ye-CNC. Kwiveki ephelileyo sithenge oomatshini bokugaya abatsha be-CNC kwaye sibabeka kwimveliso yentsimbi ngokuchanekileyo.
IJeasnn 11.11 SALE --- Iisampulu zasimahla! ! !
11.11 Umnyhadala wehlabathi wokuThenga.
KwiJeasnn, iisampulu zasimahla, uyilo lwasimahla luyaxhaswa.
Iimpawu zeJasnn: Umsebenzi owonwabisayo, ubomi obonwabisayo.
Ngo-Okthobha Jeasnn itheko lomhla wokuzalwa
Yiya intaba --- 18KM
Ndingakunceda ngantoni xa usiya kwiCanton Fair?
1.Siza kulungiselela ukuba imoto ikulande kwiCanton Fair okanye nayiphi na indawo.
3.Sinokufuna itoliki yakho.
Umsebenzi omhle!!! Ukuthengwa kweJeasnn Ukuthenga kumatshini weCITIZEN LFV CNC
Zeziphi izixhobo zeLFV ezifanelekileyo?
i-ayini yentsimbi, ialuminiyam, intsimbi, ubhedu, ubhedu, inylon, iplasitiki, kunye nokunye.
I-Micro -hite ukuya kwi-± 0.01-0.005mm ngokuchanekileyo) ngokuchanekileyo
Jeasnn Thenga uMatshini oMtsha wokuLungelelanisa iMitutoyo (CMM)
Ukuze uhlangabezane neemfuno zabathengi kwaye uqiniseke ngomgangatho ophezulu weenxalenye zensimbi, Linganisa izixhobo eziphezulu ezichanekileyo zekhompyuter ukunceda abathengi ukuphucula ukhuphiswano kwimveliso.Jiesheng Hardware (Jeasnn) thenga iJapan inspec
Ikhaya egqithileyo 1 2 3 4 5 Okulandelayokugqibela - Iyonke 44 1 ubhala page Current / Total 5 10 ngephepha ngalinye